Musharrax Madaxweyne Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni oo Garoowe Kaga Qayb Galay Kulanka Deni iyo Dadweynaha Garoowe (Sawiro) – Radio Daljir
Musharrax Madaxweyne Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni oo Garoowe Kaga Qayb Galay Kulanka Deni iyo Dadweynaha Garoowe (Sawiro)
Diseenbar 7, 2018 1:52 g 0
Musharrax Madaxweyne Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa caawa Dec 06, 2018 waxa uu caasimadda garoowe kaga qayb galay kulanka Deni iyo Dadweynaha Garoowe kulankaas oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Garoowe.
Garoonka kubadda cagta ee Classic garoowe oo kulanku ka dhacay waxaa sidoo kale ka qayb galay masuuliyiin kala duwan oo masuuliyadu kazoo qaybtay Puntland, culimaa’udiin, dhallinyaro iyo ururada haweenka, waxaana xubnihii kulanka ka hadlay ay isku waafaqeen in Puntland ay u baahan tahay in laga hirgeliyo isbeddel la taaban karo oo si dhab ah u kobcin kara horumarka ay Puntland u baahan tahay.
Musharrax Siciid Cabdullaahi Deni oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay kulanka ayaa ku dheeraaday muhiimada ay leedahay jiritaanka iyo midnimada Puntland loona baahan yahay in laga ilaaliyo wax kasta oo kala dhantaalaya wada jirka Puntland.
Musharrax Siciid Deni oo si gaar ah uga hadlay khilaafka ka taagan guddiga khilaafaadka Puntland isagoo tilmaamay in dhismaha guddigaas uu sharci ahaan leeyahay Madaxweynaha Puntland, guddiga kale ee uu soo magcaabay Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayuu musharuxu ku tilmaamay guddi aan sharci ahayn.
“ Guddiga khilaafaadka ee uusoo magcaabay Madaxweyne ku xigeenka Puntland waxaan aaminsanahay inay sharci darro tahay, balse waxaan madaxweyne ku xigeenka Puntland ku waafaqsanahay inuusan Madaxweyne Gaas ka helin xurmadii uu ka mudnaa” ayuu yiri Musharrax Siciid Deni.
Ololaha Doorashooyinka Puntland - Deni 2019 36 Wararka 15436
Musharrax Cali Xaaji warsame oo degmadda Waaciye gaaray (Daawo)